Caalamka, 10 November 2019
Iran oo laga Helay Keyd Cusub oo Saliid ah
Madaxweyne Hassan Rouhani ayaa sheegay in dhulkan shidaalka laga helay ay ku jiraan 53 billion oo foosto oo saliid qeyrin ah, wuxuuna sheegay inay kor u qaadi doonto kayda shidaalka ee Iran
Turkiga oo Celinaya Muwaadiniinta Yurub ee Daacish
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in Isniinta soo socta ay dib u celin doonto dhammaan dadka haysta dhalashada dalalka Midwga Yurub ee ka Tirsanaa Daacish kuna jira xabsiyada Turkiga
Tiktok oo Walaac Weyn Laga Muujiyay
Warbaahinta casriga ee ay bulshadu ku xariirto ayaa saamayn badan ku yeelatay qaabka ay dadku u kala war-qaataan, arrintan ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiinta iyo sharci-dejiyayaasha caalamka.
Bloomberg oo ku Biiraya Tartanka Madaxtinimo ee Mareykanka
Michael Bloomberg oo ah bilyaneer soo noqday duqqa magaalada New York ayaa ku biiraya musharraxiinta madaxtinimo ee xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada sanadka soo socda ee 2020-ka. Waxaa la sheegayaa inuu ka xareyn doono waraaqaha musharaxnimadiisa gobolka Alabama.
Twitter oo Xannibtay Akoonkii Koox Mucaarad ku ah Iiraan
U.S. iyo Shiinaha oo heshiis hor-u-dhac ah ka gaaray muranka canshuuraha
Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa maanta sheegtay in ay Shiinaha iyo Mareykanka isku raaceen dib u dhigidda qeyb ka mid ah canshuurihii dheeraadka ahaa ee labada dalba uu midba midka kale ku soo rago alaabaha ay isku soo dhoofiyaan.
Rag Sacuudiga u Jaajuusayay oo Mareykanka lagu Xiray
Saddex nin oo laba kamida u dhasheen Sacuudiga una shaqeynayay Shirkadda Twitter ayaa wajaha dacwad heer federaal, kaddib marki lagu eedeeyay in ay Sacuudiga u jaajuusayeen dadka barta twitter-ka ku dhaliila boqortooyada.
Erdogan oo Ku Hanjabay Inuu Sii Ballaarin Doono Xiriirka Ruushka
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gooddinaya inuu sii xoojin doono xiriirka milateri ee kala dhexeeya xukuumadda Moscow haddii Mareykanku uusan qaadin cunaqabateynta saaran iibka diyaaradda dagaalka ee muhiimka ah.
Shacabka K. Kuuriya oo Diiday Soo Jeedin ka Timid Trump
Shacabka Kuuriyada Koonfureed ayaa si weyn u diiday dalabka madaxweynaha Mareykanka ee ah in xukuumadda Seoul ay kordhiso qeybteeda lacagaha ku baxa askarta Mareykanka ee jooga dalkaasi. Waxayse muujiyeen iney niyad wanaag u hayaan mustaqbalka xiriirka labada dal.
Isticmaalka Teknooloojiyadda oo 50 sano jirsatay
Mudaaharaadyo ka dhan ah Mareykanka oo ka dhacay Iran
Debedbaxyadan ayaa ujeedkoodu ahaa xuska 40-sano guuradii kasoo wareegtay markii koox arday Iiraaniyiin ah ay gudaha safaaradda afduub ahaan ugu qabsadeen 52 qof oo muwaadiniin Mareykan ah oo u badnaa diblamaasiyiin.